Jeegaantu waa Cadawga 1aad ee Somaliland
Monday, 29 January 2018 13:08
Wakhtigan xaadirka ah ee aynu joogno Dalka Somaliland waxaa ka jirta Nabadgelyo buuxda oo badiba Bulshada reer Somaliland ku wada nooshahay marka laga reebo meelo kooban oo xiisado Colaadeed ka jiraan siiba Bariga Somaliland.
Nabadgelyadaas waa mid ku timid Rabitaanka Shacabka reer Somaliland. Waxaanay u soo mareen Dariiq dheer oo Qodxa badan.
Haddaba iyadoo Somaliland dhawr Bilood kadib 27 jirsanaysa lana filayay in Nidaamka Dawladnimo dhidibadu u sii adkaadaan, Nabadgelyada, Wadajirka iyo Horumarkuna sii xoogaysto ayaa Waxaa muuqata Ifafaale taas kasoo horjeeda.
Waxaa hoos u dhac Xajmi wayni ku yimid Dhaqaalihii Dalka iyo Koritaankiisaba. Waxaa u sabab ah Musuqmaasuq iyo Maamul xumida Maamulkii Jeegaan I ee uu Axmed Siilaanyo hogaaminayay.
Arrintani waxay saamayn xun ku yeelatay Nolol maalmeedkii Shacabka . Waxaa jira Sicir Barar loo maaro waayay kana dhashay Musuqmaasuqa iyo Hanti Boobka baahsan ee Maamulkii Jeegaan I Dalka ka gaystay.
Waxaa sii lumaya Towfiiqdii Shacabka reer Somaliland. Waxaa u sabab ah Maamul xumida, Qabyaalada, Eexda, Hanti Boobka iyo Naxliga uu Maamulkii Jeegaanta Baho Kulmiye ummada kala dhex dhigay oo ah Dhaxalka keliya ee lagu xasuusan doono Odaygii qaybtii hore gadhwadeenka ka ahaa, waa oday Siilaanyo e.
Waxaa kale oo sababay Doorashadii Dalka ka qabsoontay 13/11/2017 oo Shacabkii sii kala qaybisay kadib markii:-
• Maamulkii jiray si cad Hantidii iyo Imkaaniyaadkii ummada ka dhexeeyay Xisbi gaar ah ugu adeegay.
• Cashuurtii laga ururiyay Shacabka Jeebka loogu shubay Xisbi gaar ah, loona adeegsaday Laaluush iyo Musuqmaasuq lagu iibsaday Dhexdhexaadnimadii Koomishanka Qaranka, Muraaqibiintii qaarkood iyo Codadkii Danyarta.
• Ciidamadii Qaranka, Booliiskii, Gaadiidkii Dawlada, Warbaahintii IWM loogu adeegay Xisbi gaar ah
• Markii Madaxweynihii Qaranka hogaaminayay iyo Wasiiradiisii Qabyaalad iyo Jeegaanimo Xisbi gaar ah ugu ololeeyeen, ummadiina kala faquuqeen.
• 7 sanno oo Maamulkii Siilaanyo jiray wixii yaraa ee la qabtay Waxaa laga fuliyay keliya Deegaanada labada Reer ee Jeegaanta la baxay degaan.
• Dhammaan Mansabyadii Dawlada kuwooda ugu sareeya ilaa kuwooda ugu hoosaysa 80% waxaa si milgaha Dawladnimo iyo Dhaqankeenii Gobta ahaaba ka baxsan loogu taxay Dadka kasoo Jeeda labada Reer ee Jeegaanta la baxay.
• Doorashadii Dalka ka dhacday waxaa xaqiiq ahayd in Maamulkii Siilaanyo iyo Musharaxii Xisbiga Kulmiye wax walba u diyaarsadeen sidii ay Dalka Dagaal sokeeye uga ridi lahaayeen haddii aanay tooda noqon. Wax Tudhaale ahna umay haynin Shacabka masaakiinta ee la baaxaa degayay Sicir Bararka iyo Nolol xumida ay iyagu sababta u yihiin.
• Waxa ay Xabbad nool la dhaceen oon ilaa maanta laba Cali iswaydiin Dhalinyaro Mudahaadyo ka dhigay Magaalooyinka Hargaysa, Burco, Boorame iyo Ceerigaabo iyagoo 4 dhalinyaro ah ku dilay Magaalooyinka Hargaysa iyo Burco halka Daraasiin kalena ay Dhaawacyo u gaysteen. Dhalinyaradaasi waxay ahaayeen Muwaadiniin aan hubaysnayn.
Sidaas markii ay noqotay, Xisbigii Rajada ee Waddani wuxuu sameeyay Tanaasul isagoo u tudhay Shacabkiisa maadaama xalka keliya ee Maamulkii Siilaanyo iyo Xisbiga Kulmiye u diyaarka ahaa noqday Dagaal sokeeye oo ay Dalka ka ridaan.
Imika Muuse Biixi ayaa Madaxweyne ah oo looga tanaasulay Mansabkaas. Waxaa loo siiyay fursad bal inuu wixii khaldamay saxo oo Dadka isu soo jiido oo middeeyo.
Nasiib darro wuxuu qaaday durba wado qaldan, (Bahal Ceedhin ma daayo, Ninna Caado ma baajo) isagoo qaaday talaabooyinkan soo socda ilaa hadda:-
• Xukuumada uu soo dhisay 70% waxay ka kooban tahay labada Reer ee Jeegaanta la baxay.
• Waxba kamuu bedelin wixii hore ee sadbursiimo jirtay laakiin wuu sii kordhiyay uun. Taasina waxay muujinaysaa inuu qaaday Wadadii Macalinkiisii Axmed Siilaanyo. Waxa kale oo ay si gaar ah uga turjumaysaa inuu cid gaar ah Madaxweyne u yahay.
• Qabyaaladii wuxuu u tolay Shaadh cusub iyadoo Salaadiintii Jeegaanta oon Nin u maqnaynin Mahwi Faan iyo Tookh Warbaahinta horteeda Somaliland inteeda kale isula soo tubeen, si cadna u sheegteen inay iyagu Xukuumada leeyihiin.
• Wasiirkiisa Arrimaha Gudaha Maxammed Kaahin ayaa Waaran Qabasho ah u soo jaray Suldaan Reer Burco ah oo ka dareen celiyay wixii Liidnimada ahaa ee Salaadiintaas Baho Kulmiye ama Hagbadu ummada lasoo hor fadhiisteen.
• Odayaasha Reerkiisa Jeegaan Galbeed ee Gobolka Maroodi Jeex waxay Warbaahinta lasoo fadhiisteen in Biyaha Deeganka Xumbowayne laga soo saarayo aan Bariga iyo Koonfurta Hargaysa lagu cabaynin ee Deegaankooda la mariyo. Wax talaabo ahna kamuu qaadin.
• Wasiirkiisa Arrimaha Gudaha ayaa isna yeelanaya oon ciddi la wadaagaynin Masuuliyada in Caaqil Reerkiisa ahi Hub iyo Saanad Dagaal ugu raro mid ka mid ah labada Reer ee Deegaanka Dararweyne dirirtu ku dhexmartay islamarkaas markii lagu qabtay uu Maamulka Gobolka Togdheer sii daayo, Caaqilkaas ku fooganaa hurinta colaada Reeraha walaalaha iyo Ood wadaagta ah.
• Madaxweyne Muuse Biixi ayaa u jawaabay Suldaanka Guud ee Somaliland Suldaan Maxammed Suldaan Cabdilqaadir oo ka dareen celiyay hadaladii Calyada iyo Naxliga xambaarsanaa ee kasoo burqaday Afka Suldaanka Jeegaan Galbeed, Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan halka uu ka aamusay Suldaanka Reerkiisa.
• Wuxuu soo saaray ama sii jaan qaaday fikirkii lagu hagardaamaynayay Shirkada keliya ee aan Gacanta Mulkiilayaasha Jeegaanta ku jirin ee Telesom iyadoo loo sibir saarayo inay qayb ka tahay Sicir Bararka Dalka ka jira. Arrinkan ayaa ah mid Caqliyada iyo Aqoonta Dhaqaalaha midna aan ku salaysnayn laakiin ku salaysan “absolute power”, haddii ay tahay dhinaca Dhaqaalaha iyo dhinaca Maamulka Dawladnimoba inay Jeegaantu hantido si ay u dulaystaan Shacabka intiisa kale.
Arrimahaas aan kor ku xusay oo dhammaantood aan muran geli karin iyo in badan oo kale oonan Qoraalkan kooban kusoo ururin karin ayaa markhaati cad u ah inay Somaliland saartay Cagta Jidkii Dawladnimadii Soomaaliya ee sannadkii 1960 aynu la midownay ku burburtay, Dadka Soomaaliyeedna dhaxalsiisay 30 sanno oo Hoog iyo Halaag ah.
Sidaas darteed waxaan Qoraalkan kusoo ururinayaa inaynu hayno Caddaymo inagu filan in Jeegaantu tahay Cadawga koowaad ee Somaliland leedahay maanta.
Waxaa loo baahan yahay in Daalacan loogu sheego Afcaashooda Qaran Dumisnimada ah inay ka waantoobaan.
Muuse Biixina haloogu dhaarto inaan Kursiga Madaxweynimo maanta ciddi ku haysan oo loo tanaasulay laakiin taas macnaheedu aanay ahayn in dib looga yeelayo in Dalka Jeegaani wada qaadato.
Muuse Biixi wuxuu fursad u haysta muddo lixda Bilood ah inuu isu dhigo, sifaheediina la yimaado Madaxweyne Qaran iyo inuu dib u qaado sifihiisii hore oo Dagaal Oogeyaal isaga iyo Saaxiibkii Maxammed Kaahin ku dambeeyaan (between a rock and a hard place). Ragganimo meel cidhiidhiya ayay ku jirtaa.
More in this category: « Soomaaliyeey, Muuse waa kaa… Fadeexad durtaba dul hogansysa wasiirka macdanta kornayl Jaamac Maxamuud Cigaal »